Apple Music Inoburitsa Zvakasarudzika Nhoroondo Yekutamba 'Replay 2021' | IPhone nhau
Apple Music Inoburitsa Zviri pamutemo Playback Nhoroondo 'Replay 2021'
Ngirozi Gonzalez | | Apple Music, Noticias
Spotify inogara ichigara pasocial network chero Zvita wegore rega Icho chikonzero ndechekuvhurwa kwepfupiso yegore rega uko mushandisi wega wega anowana iwo manhamba evanonyanya kuteerera kune maartist, genres nenziyo dzegore rese. Parizvino, Apple Music haisati yakwanisa kusvika padanho reSpotify infographics kunyangwe ichiedza kudzikisira kushomeka neicho chainodaidza. Apple Music Dzokorora. Nekudaro, iyo Replay playlist inotangwa gore rega kutenderera Kukadzi uye inotanga kugadzirwa kubva panguva yainoburitswa Maawa mashoma apfuura, Apple Music yakaita kuvhurwa kweApple Music Replay 2021 zviri pamutemo.
Kuongorora kuteerera kwevashandisi kubvira kutanga kwegore: Replay 2021 ikozvino yave kuwanikwa
NaApple Music Replay, unogona kudzokorora mimhanzi yakaratidza gore rako. Iwe uchakwanisa kuona ruzivo nezve yako akanyanya kuridzwa maartist uye maalbum. Uye zvakare tora playlist nenziyo dzako dzakanakisa dzegore, imwe yegore rega rekunyorera kweApple Music.
Kunyange i Apple Music Replay inozoita mukurumbira pakupera kwegore, chokwadi ndechekuti gadziriro yayo inotanga kutanga kwegore painotangwa nenziyo yemimhanzi. Iyo playlist 'Replay 2021' Ikozvino yave kuwanikwa pane ese maApple Music vanyori vanoteedzera. Kune avo vasingazive, runyorwa urwu runokutendera kuti uongorore uye chengeta iyo yekutamba nhoroondo mushumiro nekudaro kuziva kuti ndedzipi nziyo dzinodiwa, maalbum uye maartist egore.
Kana iwe uri mudzidzi iwe unogona kuve nemwedzi mitanhatu yemahara Apple Music
Chinyorwa chiri mubvunzo inovandudzwa Svondo yega yega nenziyo dzinoteererwa kwazvo dzenziyo dzevhiki, nokudaro tichiwedzera kune dzesvondo rapfuura. Nenzira iyi uye nekufamba kwemavhiki, rondedzero inotsanangura gore ichave yakanyorwa pakupera kwaZvita. Iyo yakanaka nzira yekuchengeta izvo zvatinofarira.
Kana iwe uri munyoreri weMusic Music, unogona kuwana iko zvino kuburikidza neapp pazvinhu zvako kana pa online mutambi kwaunogona zvakare kuwana nhamba yehuwandu nezvemaawa akateererwa uye imwezve data rekuwedzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple Music Inoburitsa Zviri pamutemo Playback Nhoroondo 'Replay 2021'
watchOS 7.3.1 inosvika kugadzirisa nyaya dzekuchaja
Iyo nyowani "Inogara Iri" skrini yeiyo iPhone 13 ichatiratidza yakagadziriswa wachi uye bhatiri mifananidzo